ဒီဇာတ္ကားအတြက္ သရုပ္ေဆာင္နိုင္းနိုင္းဘယ္လိုေတြစြန္႕စားခဲ့သလဲ ဆိုတာ...
ဇာတ္ကားရိုက္ရင္း ေျခေထာက္အရြတ္ထိခဲ့တယ္လို႕ေျပာျပခဲ့တဲ့ နိုင္းနိုင္း
21 Mar 2018 . 6:04 PM
Golden Hour Entertainment ကေန မိတ္ဆက္တဲ့ ဇာတ္ကား ၄ ကားထဲမွာ ဒုဌဝတီကို လြန္၍ ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားလည္းပါပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားမွာ ရုိက္ကူးပါဝင္ခဲ့တဲ့ သူေတြကိုလည္း ဇာတ္ကားနဲ႔ ပတ္သတ္လို႕ အခုလိုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ႀကိဳးစားခဲ့ရတာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ ။ ဒီရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကစတင္ရိုက္ကူးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရုပ္ရွင္ကားမွာ အရည္အေသြး ပိုင္းျဖစ္တဲ့ အရုပ္ ၊ အသံ ၊ ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းေတြ ၊ ၿပီးေတာ့ အက္ရွင္ကားဆိုေတာ့ပိုၿပီးဆိုးတယ္ Safety ပိုင္းေတြပါပါလာတာေပါ့ ရိုက္တဲ့ သူေရာ ၊ သရုပ္ေဆာင္တဲ့ သူမွာပါ အႏၱရာယ္ မ်ားတာေတြရွိတယ္ ။ Setting ေတြ ဆင္ထားတယ္ ရိုက္ခါနီးက်မွ Setting ေတြကျပဳတ္က်တယ္ ဒါမ်ိဳးေတြလည္း ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ျပင္သစ္မွာပါ လည္း ဒီကားကို တစ္ပတ္ေလာက္သြားၿပီးရိုက္ခဲ့ပါတယ္။
Golden Hour မွ မိတ္ဆက္ခဲ့တဲ့ အခမ္းအနားမွာေတြ႕ရတဲ့ ဒုဌဝတီအဖြဲ႕သားမ်ား
ဇာတ္ကားကေတာ့ တင္လို႕ရေနပါၿပီ။ ရံုရွင္ေတြကိုေစာင့္ေနတာပါ။ ဒါကေတာ့ ထုတ္လုပ္သူနဲ႕ရုပ္ရွင္ရံု ေတြ ညွိေနတာေပါ့ေနာ္။ ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ တင္ခ်င္ေနပါၿပီ လို႕ ဒါရိုက္တာ အာကာ ကေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
ဒီဇာတ္ကားက အက္ရွင္ဇာတ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ထိခိုက္မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အစမ္းေလ့က်င့္တာေတြ လုပ္တဲ့ ရက္မွာပဲေျခေထာက္က အရြတ္ထိသြားပါတယ္။ အဲ့လိုထိသြားတဲ့ ေျခေထာက္နဲ႕ပဲ ဇာတ္ကားကို ၿပီးေအာင္ရိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ၾကည့္တဲ့ သူက မသိေပမယ့္ အဲ့ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ဘယ္လိုသရုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတယ္ဆိုတာ နဲ႕ ေျခေထာက္က ေထာ့နဲ႕ေထာ့နဲ႕ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ပဲသိပါတယ္။ ႀကိဳးတံတားပ်က္က်တဲ့ အခန္းေတြကအစ အစမ္းေလ့က်င့္တာမွာ တကယ္ပ်က္က်တဲ့ အခန္းေတြပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ထိခိုက္ဒါဏ္ရာေတာ့နည္းနည္း ရွိတာေပါ့ လို႕ ကိုနိုင္းနိုင္းက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားအတြက္ အစမ္းေလ့က်င့္ တာက ၁ပတ္ ၁၀ ရက္ေလာက္ရွိပါတယ္။ ရိုက္ကူးတဲ့ ကာလ ကေတာ့ ၂ လေလာက္ၾကာပါတယ္။
ဒုဌဝတီ ကို လြန္၍ ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားကေတာ့ အက္ရွင္ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး သရုပ္ေဆာင္ေတြ အေနနဲ႕ နိုင္းနိုင္း ၊ အမြန္း ၊ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၊ ဆန္းထြဋ္ နဲ႕ မ်က္နွာသစ္ သရုပ္ေဆာင္တခ်ိဳ႕ ပါဝင္ထားကာ ဒါရိုက္တာ အာကာရဲ႕ ဖန္တီးမႈ အသစ္ေတြကို ပရိသတ္ေတြ မၾကာမီ ခံစားရေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားဟာ စြန္႕စားခန္းေတြ မ်ားစြာပါဝင္တဲ့ အတြက္ ပံုမွန္ဇာတ္ကားေတြ ရိုက္ကူးတာထက္ ကုန္က်ေငြ ကို ၁ဆခြဲေလာက္ပိုသံုးထားတယ္ လို႕ ဒါရိုက္တာ အာကာ ကေျပာပါတယ္။
ဒုဌဝတီကို လြန္၍ ဇာတ္ကား ကို အမည္းေလးၾကည့္လိုက္ပါဦးေနာ္….
ဒုဌဝတီကုိလြန္၍ (The Mystery Of Burma – Beyond The Dote Hta Waddy)
Golden Hour Mandalay Entertainment မွ ပထမဦးဆံုး ပြဲဦးထြက္ ထုတ္လုပ္တင္ဆက္မယ့္ ဒါရိုုုက္တာ အာကာ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ "ဒုဌဝတီကိုလြန္၍" (The Mystery of Burma – Beyond the Dotehtawady) ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးကို ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ အျမည္းေလးအေနနဲ႔Teaser ၁ မိနစ္စာ Video အပိုင္းကေလးကိုတင္ျပလိုက္ရပါတယ္…..ဒီဇာတ္ကားႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ယခု "The Mystery of Burma" Page မွာ ဆက္တိုက္တင္သြားေပးမွာပါ…..ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈ အားေပးၾကပါအံုးဗ်ာ…..This isa1 min teaser video of Director Arkar's very first Movie "The Mystery Of Burma", produced from Golden Hour Mandalay Entertainment.We will be sharing lots of BTS photos and videos here in official page. Stay tuned and make sure to "see first".We made it, You share it. Let the world see.#MysteryOfBurma #MOBFilm #GoldenHour #ArkarProduction
Posted by The Mystery of BURMA on Friday, May 12, 2017
Credit Video- The Mystery of Burma Page
ဇာတ်ကားရိုက်ရင်း ခြေထောက်အရွတ်ထိခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့ နိုင်းနိုင်း
Golden Hour Entertainment ကနေ မိတ်ဆက်တဲ့ ဇာတ်ကား ၄ ကားထဲမှာ ဒုဌဝတီကို လွန်၍ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလည်းပါပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ရိုက်ကူးပါဝင်ခဲ့တဲ့ သူတွေကိုလည်း ဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အခုလိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကြိုးစားခဲ့ရတာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ ။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကစတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာ အရည်အသွေး ပိုင်းဖြစ်တဲ့ အရုပ် ၊ အသံ ၊ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတွေ ၊ ပြီးတော့ အက်ရှင်ကားဆိုတော့ပိုပြီးဆိုးတယ် Safety ပိုင်းတွေပါပါလာတာပေါ့ ရိုက်တဲ့ သူရော ၊ သရုပ်ဆောင်တဲ့ သူမှာပါ အန္တရာယ် များတာတွေရှိတယ် ။ Setting တွေ ဆင်ထားတယ် ရိုက်ခါနီးကျမှ Setting တွေကပြုတ်ကျတယ် ဒါမျိုးတွေလည်း ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ပြင်သစ်မှာပါ လည်း ဒီကားကို တစ်ပတ်လောက်သွားပြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
Golden Hour မှ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ အခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့ ဒုဌဝတီအဖွဲ့သားများ
ဇာတ်ကားကတော့ တင်လို့ရနေပါပြီ။ ရုံရှင်တွေကိုစောင့်နေတာပါ။ ဒါကတော့ ထုတ်လုပ်သူနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံ တွေ ညှိနေတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော် ကတော့ တင်ချင်နေပါပြီ လို့ ဒါရိုက်တာ အာကာ ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားက အက်ရှင်ဇာတ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အစမ်းလေ့ကျင့်တာတွေ လုပ်တဲ့ ရက်မှာပဲခြေထောက်က အရွတ်ထိသွားပါတယ်။ အဲ့လိုထိသွားတဲ့ ခြေထောက်နဲ့ပဲ ဇာတ်ကားကို ပြီးအောင်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကြည့်တဲ့ သူက မသိပေမယ့် အဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော်ဘယ်လိုသရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ နဲ့ ခြေထောက်က ထော့နဲ့ထော့နဲ့ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်ပဲသိပါတယ်။ ကြိုးတံတားပျက်ကျတဲ့ အခန်းတွေကအစ အစမ်းလေ့ကျင့်တာမှာ တကယ်ပျက်ကျတဲ့ အခန်းတွေပါတယ် ဒါကြောင့်ထိခိုက်ဒါဏ်ရာတော့နည်းနည်း ရှိတာပေါ့ လို့ ကိုနိုင်းနိုင်းက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားအတွက် အစမ်းလေ့ကျင့် တာက ၁ပတ် ၁၀ ရက်လောက်ရှိပါတယ်။ ရိုက်ကူးတဲ့ ကာလ ကတော့ ၂ လလောက်ကြာပါတယ်။
ဒုဌဝတီ ကို လွန်၍ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ အက်ရှင်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေ အနေနဲ့ နိုင်းနိုင်း ၊ အမွန်း ၊ ဇော်ဇော်အောင်၊ ဆန်းထွဋ် နဲ့ မျက်နှာသစ် သရုပ်ဆောင်တချို့ ပါဝင်ထားကာ ဒါရိုက်တာ အာကာရဲ့ ဖန်တီးမှု အသစ်တွေကို ပရိသတ်တွေ မကြာမီ ခံစားရတော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ စွန့်စားခန်းတွေ များစွာပါဝင်တဲ့ အတွက် ပုံမှန်ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးတာထက် ကုန်ကျငွေ ကို ၁ဆခွဲလောက်ပိုသုံးထားတယ် လို့ ဒါရိုက်တာ အာကာ ကပြောပါတယ်။
ဒုဌဝတီကို လွန်၍ ဇာတ်ကား ကို အမည်းလေးကြည့်လိုက်ပါဦးနော်….
Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင်တင်ဆက်နေသည့် စာမျက်နှာများတွင် အခရာမှတင်ဆက်ထားသည့် ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများကို ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရယူထားခြင်းမရှိဘဲ စီးပွားဖြစ် ကူးယူသုံးစွဲနေသည်များကို တွေ့ရှိနေရပါသည်။ အခရာစာမျက်နှာအား တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ဝေမျှသည်ကို အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်သော်လည်း စီပွားဖြစ်တည်ထောင်ထားသည့် စာမျက်နှာများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ကူးယူတင်ဆက်နေသည်များကိုမူ ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အခရာမီဒီယာမှတင်ဆက်နေသည့် အကြောင်းအရာများထဲမှ စာသားအချို့ကိုဖြစ်စေ ၊ အပုဒ်လိုက်ဖြစ်စေ ၊ တစ်ပိုဒ်ခြင်းဖြစ်စေ ကူးယူသုံးစွဲခြင်းမပြုရန်နှင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါက ခိုးယူသုံးစွဲနေသည့် စာမျက်နှာများကို အမည်နှင့်တကွ အများသိစေရန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။>